Ahụmahụ na 127th Canton Fair
N'ịbụ nke ọnọdụ ọrịa ahụ metụtara, emere 127th Canton Fair na ntanetị wee kwụsị kpamkpam. Ohere na nsogbu di iche na ntaneti Canton Fair, nke bu ule nye ndi oru ahia na ndi ahia nke mba China. Haorui otu na-ekere òkè ...
Kedu ụdị oche mposi na-amasị gị?
MDF (Ọkara-njupụta Fiberboard) bụ arụpụtara osisi ngwaahịa na pịa osisi eriri n'ime ewepụghị osisi n'okpuru elu okpomọkụ na nrụgide, mgbe ahụ, a ga-ebipụ ka e mere udi. Ma otu-agba sere ma ọ bụ kpuchie site ji achọ patter ...
Ministri Azụmaahịa nke PRC kpebiri na a ga-eme 127th Canton Fair na ntanetị site na June 15 ruo 24, 2020.
China Import na Export Fair ("Canton Fair" ma ọ bụ "The Fair"), nke a ga-eme site na June 15 ruo 24, na-akpọ ndị karịrị 400,000 ndị na-azụ ahịa ụwa ihe ngosi nke 127th na nke mbụ mbụ na ntanetị. Site na nyiwe dijitalụ, Canton Fair ga-akwalite ịmaliteghachi azụmaahịa na o ...